Manafatra fiara avy any Aostralia mankany UK | Ny fanafarana ny fiarako
Te hampiditra ny fiaran'ny Aostralianina any Angletera ve ianao?
Azontsika atao ny mandray an-tanana ny dingana rehetra amin'ny fanafarana ny fiaranao avy any Aostralia, ao anatin'izany ny fanondranana, ny fandefasana, ny fadin-tseranana, ny fivarotana kamiao any UK, ny fitsapana ny fanarahan-dalàna ary ny fisoratana anarana DVLA. Izahay no mitantana ny fizotrany rehetra, mamonjy fotoana, manahirana ary tsy ampoizina.
Maninona no mifidy anay hanafatra ny fiaranao avy any Aostralia?
Fandefasana (entana an-dranomasina)
Ho an'ny fiara avy any Aostralia, afaka mandray an-tanana ny fandefasana amin'ny anaranao izahay. Anisan'izany ny fandaharam-potoanan'ny fiara fitaterana an-dranomasina, ny famoahana ary ny famoahana azy.
Fanadalana ny fadin-tseranana (NOVA)
Ny fizotry ny fandoavan-ketra sy ny taratasy takiana amin'ny fanadiovana ny fiaranao dia ny anay ihany no miantoka ny tsy hisian'ny saram-pitahirizana fanampiny ny fiaranao.
Logistics (mpitatitra entana)
Mandritra ny dingana rehetra amin'ny fampidirana ny fiara, dia eo an-tanana izahay handamina ny lojika anatiny mifandraika amin'ny anaranao mba hahazoana antoka fa tsy misy fahatarana.
Fanovana sy fanandramana
Ny fiara dia novaina sy nosedraina ho an'ny fanarahan-dalàna ao amin'ny Fanjakana Mitambatra. Aorian'izay dia atao ny fanandramana mifandraika rehetra eto an-toerana ao amin'ny lalam-panadinana IVA an'ny anay manokana.
Fangatahana fisoratana anarana`
Raha vantany vao mifanaraka ny fiaran'ny Aostralianina dia mikarakara ny antontan-taratasy rehetra ilaina amin'ny fisoratana anarana ny fiaranao any United Kingdom izahay ary azo angonina na hatolotra ilay fiara.
Mitondra ny fiaranao mankany amin'ny Fanjakana Mitambatra
Nandritra ny taona maro nanafarana fiara avy any Aostralia ka hatrany UK, dia nifantina tamim-pitandremana ireo manam-pahaizana momba ny fandefasana fiara izay miasa ivelan'ny seranan-tsambo rehetra ao Aostralia hitantana ny fiaran'ny mpanjifanay.
Manolotra fanangonana maimaim-poana ao anatin'ny faritry ny tanànan'i Brisbane, Sydney, Melbourne ary Perth izahay saingy afaka manampy teny iray hanangonana ny fiaranao avy lavitra any Aostralia araka ny fangatahanao.
Matetika izahay mandefa ireo fiara mampiasa kaontenera iraisana, izany dia ahafahanao mahazo tombony amin'ny taha mihena amin'ny fanafarana ny fiaranao mankany UK noho ny fizarana ny vidin'ny kaontenera amin'ny fiara hafa ampidirinay ho an'ny mpanjifa.
Ny fandefasana kaontenera dia fomba azo antoka sy azo antoka hanafatra ny fiaranao any Angletera ary matetika no lafo indrindra. Raha mila kaontenera 20ft natokana ho an'ny fiaranao ianao dia anontanio azafady, fa izahay koa dia manome izany ho an'ny mpanjifanay.
Ohatrinona no haba aloanao handefasana ny fiaran'ny aostralianina ho any UK?
Rehefa manafatra fiara avy any Aostralia ianao, dia misy fomba efatra hanadiovana ny fomba amam-panao any Angletera, arakaraka ny fiavian'ireo fiara, ny taonanao ary ny toe-javatra misy anao:
Raha manafatra fiara novokarina ivelan'ny Vondrona Eoropeana ianao dia handoa hetra 20% VAT sy hetra 10%.
Amin'ny lafiny iray, raha manafatra fiara novokarina tao anatin'ny EU ianao dia tsy maintsy mandoa 20% VAT sy £ 50.
Raha manafatra fiara mihoatra ny 30 taona ianao ary tsy voaova be dia be ny VAT 5% ihany.
Miverina amin'ny maha mpifindra monina any United Kingdom anao ve ianao? Raha manana enina enim-bolana mahery ianao ary manana porofo fa hipetraka ao Aostralia maharitra 12 volana ianao, dia tsy hampandoavina hetra sy hetra ny ankamaroan'ny entana azonao.
Fanovana fiara Australiana sy fankatoavana karazana
Ho an'ny fiara latsaky ny folo taona, rehefa tonga any Angletera, ny fiaranao dia mila manaraka ny fankatoavana karazana UK.
Izahay dia manao izany amin'ny alàlan'ny fitsapana IVA. Izahay ihany no manana tobim-panadinana IVA tsy miankina eto UK, midika izany fa tsy hiandry toeram-panadinana any amin'ny foibem-panadinana governemanta ny fiaranao, izay mety haharitra herinandro, raha tsy volana maromaro vao azo. Izahay dia manao fitiliana IVA isan-kerinandro eny an-toerana ary noho izany dia manana ny fihodinana haingana indrindra amin'ny fisoratana anarana ny fiaranao sy amin'ny lalana UK.
Ny fiara tsirairay dia samy hafa ary ny mpanamboatra tsirairay dia manana fenitra fanohanana samihafa amin'ny fanampiana ny mpanjifany amin'ny alàlan'ny dingana fanafarana, koa azafady mba makà quote mba ahafahantsika mifanakalo hevitra momba ny hafainganam-pandeha sy ny vidiny mety indrindra amin'ny toe-javatra misy anao.
Izahay dia mitantana ny fizotrany manontolo amin'ny anaranao, na mifandraika amin'ny ekipa homolojikan'ny mpanamboatra fiara na ny Sampan-draharahan'ny Fitaterana, mba hahafahanao miala sasatra amin'ny fahalalana fa voasoratra ara-dalàna amin'ny DVLA ianao amin'ny fotoana fohy indrindra.
Ny fiara aostralianina dia mety mitaky fanovana vitsivitsy, ao anatin'izany ny speedo hanehoana ny famakiana MPH sy ny fametrahana ny hazavana any aoriana raha toa ka mbola tsy mifanaraka amin'ny rehetra izao.
Nanangana katalaogy be dia be momba ny fanamboarana sy ny maodely fiara nafaranay izahay mba hahafahanao manome tombantombana marina momba izay ilain'ny fiaranao ho vonona amin'ny fitsapana IVA.
Fiara efa mihoatra ny folo taona
Ny fiara mihoatra ny 10 taona dia tsy mahazo alalana amin'ny karazana fa mbola mila fitsapana fiarovana, antsoina hoe MOT, ary fanovana mitovy amin'ny fitsapana IVA alohan'ny fisoratana anarana. Miankina amin'ny taona ny fanovana fa amin'ny ankapobeny dia amin'ny jiro zavona aoriana.
Raha mihoatra ny 40 taona ny fiaranao dia tsy mila fitsapana MOT izany ary azo aterina mivantana any amin'ny adiresinao UK alohan'ny fisoratana anarana.
Hiverina any amin'ny UK
Mponina mifindra monina avy any Aostralia ve ianao?
Betsaka ny olona manapa-kevitra ny hamerina ny fiarany avy any Aostralia nanararaotra ny fandrisihana tsy misy hetra natolotra rehefa mifindra toerana.
Azontsika atao ny manampy amin'ny fikarakarana ny fiara raha mbola eo am-pandehanana ianao. Raha nisafidy ny handefa ny fanananao manokana miaraka amin'ny fiaranao ao anaty kaontenera iray ihany izahay dia eo an-tanana ihany koa hanangona ny fiara amin'ny anaranao.
Miaraka amin'ny manam-pahaizana manokana momba ny trano TOR, afaka manampy amin'ny fangatahana famindrana ny trano hipetrahana ianao raha manana olana.
Ny manahy ny amin'ny fisoratana anarana ny fiara dia zavatra tianay ho mora aminao. Aza misalasala mifandray amin'ny fangatahana momba ny fizotry ny TOR.
Raha te hahalala bebe kokoa momba ny Famindram-ponina fanampiana dia jereo ny rohy eto ambany!
[ucaddon_uc_discount_flipbox product_name=”TOR Vehicle Imports” heading=”Te-hanafatra ny fiaranao amin'ny teti-bola ToR ve ianao?” para = "Ny fanafarana fiarako dia eto hanampy amin'ny zava-drehetra hanala ny adin-tsaina amin'ny fitondrana ny fiaranao ho any Royaume-Uni. Aza misalasala mifandray amin'ny teny nindramina sy torolalana fanampiny momba ny fanafarana eo ambanin'ny tetika ToR. ” btn_text=”Mahazoa teny iray ” product_img=”14006″ primary_color=”#f3f3f3″ price_background=”#333″ price=”” back_background_color=”#333″ rohy=”https://mycarimport.co.uk/contact” uc_fonts_data =”JTdCJTdE”]
Azafady, azafady fa afaka manaiky fandoavam-bola amin'ny dolara Aostraliana izahay amin'ny famindrana mponina mba hanomezana sanda tsara indrindra amin'ny vola rehefa manafatra ny fiaranao any Royaume-Uni.